Melleteriga Baarma oo laga hor istaagay in ay Gummaadaan Muslimiinta Rohingga.
Wednesday February 06, 2019 - 16:49:27 in Wararka by Liibaan Jeexoow
dhaq dhaqaaq hubeysan oo ay leeyihiin muslimiinta Rohinga ee waanka Miyanmaar ama Boorma ayaa ku dhawaaqay in ay ka hor tageen isku day hor leh oo ciidamada gaalada wadankaas ku doonayeen in ay ku gummaadaan shacab muslimiin ah.
Bayaan ay soo saartay jamaacada ciidanka badbaadada Rohinga oo lagu faafiyay barteeda twitterka ayay ku sheegtay in ay si adag uga hor tagtay isku day ay ciidamada xukuumadda gummaadka Buudida Mayanmar ku doonaysay in ay ku xasuuqdo shacabka muslimiinta ee ku dhaqanka gobolka Araakaan.
Bayaanka ayaa lagu yiri "xarakada muqaawamada majoojin doonto iska caabinta inta baabi'inta lagu hayo dadka Rohingga cadaaladuna ay gobolka ka maqantahay".
Jamaacadan muslimiinta Rohingga leeyihiin ayaa la aas-aasay sanaddii 2012 waxayna sheegtay in ay muslimiinta ka difaacayso gummaadka uga imaanaya mushrikiinta buudiyiinta ee wadanka Boorma ku badan.
Cudurka Dilaaga ah ee Ebola oo laga helay Wadanka Kenya.